Fiaraha-miasa stratejika amin'ny ScienceOpen - AfricaArXiv
navoakan'ny Jo Havemann on 27 Janoary 2020 27 Janoary 2020
ScienceOpen sy AfricaArXiv dia miara-miasa amin'ny fanomezana afrikana mpikaroka afrikanina haingana, ny tambajotra ary ny fiaraha-miasa.
Ny sehatra fikarohana sy famoahana ScienceOpen dia manome serivisy sy endri-javatra mifandraika amin'ny mpanonta, andrim-panjakana ary mpikaroka, ao anatin'izany ny fampiantranoana ny votoaty, ny fananganana kontekeny ary ny fijerena fahitana.
Tena faly izahay hiaraha-miasa amin'ny AfricaArXiv mba hanome safidy fanampiny ho an'ny mpikaroka Afrikana ary manampy mba hanasongadinana ny mari-pahaizana tsara indrindra vokarina ao anaty tambajotra hitanay.
Stephanie Dawson, Tale Jeneralin'ny ScienceOpen
Amin'ny maha mpikaroka dia afaka manangana ny mombamomba fikarohana 'misokatra' anao amin'i ScienceOpen ianao manaraka izao:
Mikaroka ary mikaroka fikarohana mifandraika amin'ny 60 tapitrisa lahatsoratra momba ny Open Access sy lahatsoratra firaketana lahatsoratra
Zarao ny fahaizany ary mahazo tombony amin'ny alàlan'ny famerenana am-pahalalana ny lahatsoratra rehetra
Avoahy ny peo or preprint ary asao ny mpikaroka mahaliana hijery ny asanao. Fampiasana fanaraha-maso sy metika voafantina ho an'ny famoahana anao.
Mamorona Koleksi topical mba hampivoatra ny sehatry ny fikarohana ataonao
Ny ScienceOpen Collections dia manome toerana ho an'ny vondron'olona ho an'ny fananganana, fitsinjarana ary fanombanana ny vaovao manam-pahaizana.
AfricaArXiv dia mandresy ny famoriam-bola ScienceOpen AfricaArXiv Preprints izay manangona ny votoatin'ny AfricaArXiv izay avy amina sehatra fampiantranoana hafa: ny Open Framola momba ny siansa misokatra ary Zenodo. Manomboka anio, azonao atao ny mampiditra ny sora-tanana nosoratanao mivantana mankany amin'ny lampihazo ScienceOpen via the Mandefasa lahatsoratra iray bokotra. Ny sora-tanana nataonao dia handalo fisavana arak'asa iray amin'ny mpikambana ao amin'ny ekipanay ary raha ankatoavina dia alefa amin'ny Internet miaraka amin'ny Crossref DOI ary CC BY 4.0 licence licence. Vantany vao an-tserasera amin'ny valan-tsiansa ScienceOpen ny soratanao dia afaka manasa mpikaroka hafa amin'ny sehatry ny sahananao ianao hanoratra tatitra Open Peer Review.
Ny endri-javatra fanampiny omen'ny ScienceOpen momba ny famerenam-bolo manara-penitra momba ny fanomanana dia manome tombony be dia be ho an'ny mpikaroka ao Afrika sy eran-tany. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny mpanoratra ao amin'ny collection AfricaArXiv, ny fiarahamonina ScienceOpen dia afaka miara-miasa mivantana, manome soso-kevitra ary manome soso-kevitra amin'ny fanatsarana ireo sora-tanana. Tsy hiantoka fotsiny ny tahirin-kevitra momba ny valin'ny fikarohana momba ny kalitao fa hamoronana fiaraha-miasa manerana ny sisintany ihany koa.
Osman Aldirdiri ao amin'ny AfricaArXiv
Hijery sy hizaha ny AfricaArXiv Preprints famoriam-bola amin'ny ScienceOpen.
Mianara ny fomba hanoloranao amin'ny AfricaArXiv amin'ny alàlan'ny ScienceOpen.
ScienceOpen dia sehatra fitadiavana fikarohana ho an'ny fikarohana manam-pahaizana manerana ny taranja rehetra. Avy amin'ny fikaroham-bidy marani-dàlana an-tsehatra hatrany amin'ny fanangonana fikarohana, famerenana ny fisokafan'ny mpijery, famintinana famintinana ary maro hafa, dia misy safidy feno mahomby hahitana sy hizarana valiny fikarohana. | Website: scienceopen.com - Twitter: @Science_Open
Momba ny AfricaArXiv
AfricArxiv dia arsivika dizitaly tarika ho an'ny orinasam-pikarohana afrikanina. Manome sehatra tsy mitady tombombarotra izahay handefasana taratasy miasa, fanomanana, sora-tanana ekena (lahatsoratra an-tsoratra), fanolorana, takelaka ho an'ny serivisy mpiara-miasa aminay. Ny AfricaArxiv dia natokana hanokafana fikarohana sy fiaraha-miasa eo amin'ireo mpahay siansa afrikanina, mba hampitomboana ny fahitana ny famoahana fikarohana Afrikana ary hananganana fiaraha-miasa interdisipliplika manerantany. | Website: africarxiv.org - Twitter: @AfricArXiv
Tags: fiaraha-miasaPeer ReviewScienceOpen
Fifanakalozana fifanakalozana ara-pahalalana amin'ny lafiny zoro avy atsy Afrika
Ity lahatsoratra ity dia navoaka voalohany tany ela-newsportal.com "Fikarohana akademika sy fahalalana avy any Afrika ary tokony ho afaka malalaka ho an'ireo rehetra te-hiditra, hampiasa na hampiasa azy amin'ny fotoana mitovy Hamaky bebe kokoa…
Resadresaka ZBW Mediatalk momba ny AfricaArXiv sy ny fahasamihafanan'ny fiteny amin'ny Siansa
Ity resadresaka manaraka ity dia nivoaka tao amin'ny zbw-mediatalk.eu ary nahazo alalana tamin'ny Creative Commons BY 4.0. Ankafizo ny famakiana! Zava-dehibe ny hiatrehana ny fangaraharana, ny fidirana malalaka sy ny fifanakalozan-kevitra manerantany amin'ny fikarohana Hamaky bebe kokoa…